किन हुन्छ युरिक एसिड, युरिक एसिड कसरी जोगिने ? – Samacharpati
किन हुन्छ युरिक एसिड, युरिक एसिड कसरी जोगिने ?
काठमान्डाैँ, १५ वैशाख । सामान्यतया युरिक एसिड शरीरको कोशिका तथा हामीले खाएका खानेकुराबाट बन्छ । त्यसमध्येको धेरैजसो एसिडलाई मिगौलाले छानेर पिसाबद्वारा शरीरबाट बाहिर फाल्ने गर्छ । तर कुनै कारणवस मिर्गौलाले उक्त एसिडलाई छान्न नसके यसले रगतमा युरिक एसिडको स्तरलाई बढाउने गर्छ । जसका कारण युरिक एसिडको समस्या निम्तिने गर्छ ।
शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेमा मांसपेशी सुन्निनुका साथै जोर्नी दुख्ने, औला सुन्निे गर्छ । समयमै यसको लक्षण थाहा पाएर पनि यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
युरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन तथा नाइट्रोजन जस्ता तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । यो शरीरमा रहेको प्रोटिनबाट एमिनो एसिडको रुपमा प्राप्त हुन्छ , यसको मात्रा पिसाबद्धारा शरीरबाट बाहिरिने गर्छ । तर जब शरीरमा यसको मात्रा बढ्छ, तब यो शरीरभित्र जम्मा हुनथाल्छ र हड्डीमा क्षति पुर्याउने गर्छ । युरिक एसिड भएमा आर्थराइटिस हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने व्यक्तिलाई युरिक एसिडको सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यस्तै, खानामा प्रोटिनको कमी भएमा पनि युरिक एसिडको समस्या निम्तिन सक्छ । यसको जोखिम कम गर्न समयमा खाने तथा सन्तुलित आहार खानु पर्छ ।
खाना पकाउँदा वटर वा भेजिटेबल आयलको सट्टा जैतुन (ओलिभ)को तेल प्रयोग गरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । किनकी जैतुनको तेलको प्रयोगले शरीरमा अतिरिक्त युरिक एसिड जम्मा हुँदैन । यो मुटुको लागि पनि लाभदायक मानिन्छ ।
आर्थराइटिस र युरिक एसिडको समस्या ज्वानोको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । ज्वानोमा एन्टीअक्सिडेन्ट तथा डाईयुरेटिक गुण हुन्छ, जसले दुखाई कम गन मद्दत गर्छ । यसमा एन्टीसेप्टीक गुण पनि हुने भएकोले यो समस्यामा ज्वानोको प्रयोग द्धारा प्राकृतिक उपचार गरिन्छ ।
रातो खुर्सानी, टमाटर, ब्रोकाउली तथा अंगुर आदीमा एन्टीअक्सिडेन्ट भिटामिन भरपूर मात्रामा हुन्छ । एन्टीअक्सिडेन्ट भिटामिनले फ्रि रेडिकल्सलाई शरीरमा हमला गर्नबाट रोक्छ । जसले गर्दा शरीरमा युरिक एसिडको स्तर कम हुन पुग्छ ।
यसबाहेक, माछा तथा मासुको सेवन नगरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
भारतका विभिन्न स्थानबाट अर्घाखाँचीमा आउनेको सङ्ख्या १,३८९ पुग्याे
लकडाउनमा सबैका लागि उपयोगी हुने बलिउड अभिनेत्री करिनाको टिप्स
हाम्राे गाउँ घरमै सजिलै पाइने लट्टे सागमा पाइन्छ यस्ताे भिटामिन
बागलुङमा असिनाबाट ५३ लाख १८ हजार ३२० बराबरको क्षति
पूजापाठ देखी आर्युवेद सम्मकाे काम गर्छ दुबोले
रोल्पामा पहिराका कारण बस्ती स्थानान्तण गरिने
चोरी तस्करीमा समातिएका काठ लिलाम बिक्रीबाट रु ७४ लाख राजश्व